Mogadishu Journal » Dowladda Soomaaliya oo War ka soo saartay Madaafiic ku dhacday Wadajir
Mjournal :-Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa cambaareysay weerar madaafiic ahaa oo shalay lagu qaaday xaafado ka tirsan degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho.
War saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Warfaafinta oo ku qornaa afka English-ka ayaa loogu tacsiyadeeyay dadkii noloshooda ku waayay, isla markaana dadkii ku dhaawacmay u rajeysay in alle uu si degdeg u bogsiiyo.
“Dowladda Federaalka waxay aad uga xun tahay falkan foosha xun ee fuleynimada ahaa oo lagu soo beegay maalinta Xornimada oo ah maalin u dabaal dagayaan shacabka iyo qaranka”ayaa lagu yiri War saxaafadeedka.
Madaafiicda ayaa saddex ka mid ah ku dhacay xaafado u dhow Xarunta AMISOM ee Xalane, waxaana ku dhintay afar ruux, halka sideed kale ay ku dhaawacmeen.
Wararka ayaa sheegaya in mid ka mid ah madaaficida uu ku dhacay Dugsi Qur’aan ay carruur dhiganeysay, kaasoo khasaaraha ugu badan geystay.
Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarkii Madaafiicda ee shalay, waxaana ay tilmaameen inay la beegsadeen Xarunta AMISOM ee Xalane.
Madaafiicda shalay ku dhacday xaafado ka tirsan degmada Wadajir ayaa waxaa uu ku soo aaday, iyadoo magaalada Muqdisho ay ka socdeen dabaal degga xuska 1-da Luulyo oo ku beegan markii Gobolada Koofureed ay qaateen Xornimada iyo midowgii Gobolada Koofur iyo waqooyi.
Ciidamo ka tirsan Dowlada oo saakay dil ka geestay Muqdisho iyo Caro ka dhalatay